‘साथीहरु व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेपछि मलाई पनि के गरौं भन्ने लागिरहेको छ’
‘साथीहरु व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रेपछि मलाई पनि के गरौं भन्ने लागिरहेको छ’ शेखर गोल्छा, भावि अध्यक्ष- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
जनतापाटी बिहिवार, असार १८, २०७७, ०४:२१:०० मा प्रकाशित
महासंघको साधारण सभाको तयारी कसरी गरिरहनु भएको छ ?
साउन २६ र २७ गते साधारण सभा हुंदैछ । यसपटकको साधारण सभामा निर्वाचन पनि हुने भएकोले त्यसको लागि पनि आवश्यक तयारीहरु भैरहेको छ । निर्वाचन प्रकृया स्वच्छरुपमा सम्पन्न गर्नको लागि निर्वाचन समितिले काम गरिरहेको छ ।
तपाई त अध्यक्ष बन्ने निश्चित भैसक्यो, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चांही कस्लाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा तठस्थ बस्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो प्रयास तठस्थ बस्ने नै हो । अहिले मात्र होइन, विगतदेखि नै म महासंघलाई सहमती र सहकार्यको आधारमा संचालन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको छु र जहिले पनि त्यसको लागि नै प्रयास गरिरहेको छु । महासंघ भनेको सबैको साझा संगठन हो र यसलाई सबै मिलेर बलियो बनाउने हो । त्यसैले मेरो अधिकतम प्रयास सहमती र सहकार्य नै हो । र, त्यसको लागि मैले अहिले चुनाव लडिरहेका दुवै पक्षलाई अनुरोध गरिरहेको छु ।
सहमती हुने संभावना छ र ?
चुनाव हुदैमा आत्तिइहाल्ने कुरा हुंदैन । विग्रने कुरा हुंदैन । मुख्य कुरा चुनावमा स्वस्थ्य ढंगले प्रतिस्पर्धा गरौं । आफ्ना कुराहरु राखौं । साथीहरुलाई आकर्षित गरौं, व्यक्तिगत आक्षेपहरु कसैलाई नलगाउँ भन्ने अनुरोध हो । मैले साथीहरुलाई बारम्बार त्यही कुरा भनिरहेको छु । चुनावमा हारजित हुने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा पनि महासंघलाई केन्द्रमा राखेर चुनावि प्रकृयामा सहभागि होउँ भन्ने मेरो आग्रह हो ।
तपाईले तठस्थ बस्छु भनिरहनु भएको छ, त्यो कत्तिको संभव छ ? किनकी तठस्थ बसेरै पनि तपाई अध्यक्ष त हुनुहोला, तर आफू अनुकूलको टिमले चुनाव जितेन भने त काम गर्न गाह्रो होला नी, होइन ?
जस्ले जिते पनि महासंघ भित्रकै साथीहरुले जित्ने हो, त्यसैले खासै फरक पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । महासंघको विधान र प्रकृया भित्र रहेर काम गर्ने हो, त्यो अनुसार गरिन्छ । त्यसैले म तठस्थ वस्न खोजिरहेको छु । तर, केही साथीहरुले जवर्जस्ती आक्षेप लगाइरहेका छन् । अध्यक्ष भएको छ महिनामै हटाइदिन्छु जस्ता कुराहरु गर्न थालेका छन् । त्यस्ले गर्दा बोल्नै पर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । म व्यक्तिगत रुपमा आरोप प्रत्यारोपको पक्षमा कहिल्यै थिइन, तर साथीहरु त्यसरी उत्रिन थालेपछि के गर्ने भन्ने लाग्न थालेको छ ।
चण्डि ढकालमाथिको कारवाहीको खास कुरा के हो ? साधारण सभामा त्यसको कस्तो असर पर्ला ?
कारवाही हुनै पर्दथ्यो । महासंघ व्यक्तिगत कुरा गर्ने ठाउं होइन, सस्थागत र सामुहिक कुरा गर्ने ठाउं हो । त्यसको आफ्नै विधान र प्रकृया छ र त्यहीअनुसार हरेक व्यक्ति चल्नुपर्छ । व्यक्तिगतरुपमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेपछि जो माथि पनि कारवाही हुन्छ, गर्नुपर्छ । त्यसैले त्यो कारवाही पूर्णरुपमा ठीक छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।
साधारण सभामा त्यसको कुनै असर नपर्ला ?
साधारण सभा महासंघको विधान र प्रकृया अनुसार हुन्छ । त्यसमा व्यक्तिगत कुराले महत्व राख्दैन र त्यसले कुनै असर गर्दैन ।
उद्योगि व्यवसायीका मुद्धाहरु उठाउने विषयमा महासंघको अहिलेको नेतृत्व पूर्णरुपमा असफल भयो, सरकारको सहयोगी जस्तो मात्र भयो भन्ने आरोप पनि छ नी, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
हामी आलोचनामा बढी रमाउंछौं । त्यसैले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराले धेरै चर्चा पाउंछ । महासंघको अहिलेको कार्यकालमा निकै महत्पपूर्ण कामहरु भएका छन् । तर, तिनीहरुको बारेमा चर्चा गरिदैन । खाली नकारात्मक काम कुराहरु खोजि गर्ने र त्यसको प्रचारमै रमाउने प्रवृत्तिले गर्दा भएका राम्रा कामहरु पनि ओझेलमा परे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको सरकारको सहयोगी संस्था नै हो । सरकारसंग सहकार्य गर्ने संस्था नै हो । सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्य विना देशको विकास संभव छैन । त्यसैले महासंघले सरकारसंग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने नै हो भन्नेमा भ्रममा नपरौं ।
अध्यक्ष हुदैं हुनुहुन्छ, महासंघ कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुनै योजना बनाउनु भएको छ ? कि अध्यक्ष भैहाल्छु जसरी चल्छ, चल्छ भन्ने लागेको छ ?
महासंघलाई समग्र रुपमा कसरी संचालन गर्ने भन्ने बारेमा मैले निकै गहन रुपमा योजना बनाएको छु । उपयुक्त समय आएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछु ।
लापसे जाँचः प्रहरीसंग योजना छ, उपकरण छैन बुधवार, श्रावण १, २०७६, १०:३४:००
दक्षिण कोरियाको उत्तरपश्चिममा भिषण आगलागी, राष्ट्रिय प्रकोपको घोषणा शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५, ०९:४३:००
पाल्पामा बासी खाना खाँदा पाल्पामा १०५ जना बिरामी शुक्रवार, जेठ ३, २०७६, ०६:२२:००
'उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन'
ठूलै कारण नभई एमसीसी खारेज गर्नुहुँदैन : अर्थमन्त्री खतिवडा
'सुनको मूल्य अझै बढ्छ'